२०७७ जेष्ठ ९, शुक्रबार १८:२६
टेलिभिजन स्क्रीनमा मोटो अक्षरमा आयो- “भारतको खान्छौ, चीनको गीत गाउँछौ।” त्यसपछि शुरू हुन्छ अभिनेत्री मनीषा कोइरालामाथि तीनजना समाचारवाचकद्वारा आक्रमण; ती समाचारवाचक जसले हरेक बिहानी एबीपी न्यूज च्यानलमा ‘नमस्ते भारत’ नामक कार्यक्रम चलाउँछन्। सन्दर्भ थियो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग भन्दै नेपालद्वारा जारी नक्साका सम्बन्धमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा गरिएको ट्वीटबारे मनीषाले गरेको एउटा ट्वीट। त्यसमा उनले लेखेकी थिइन्, “हाम्रो सानो देशको गरिमा राखेकोमा धन्यवाद। तीन महान् देशीबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादको हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ।” बस् यति नै। अत्यन्त शालीन भाषामा एक नागरिकले आफ्नो देशको सम्प्रभुता र आत्मसम्मानलाई रेखाङ्कित गरिएको एउटा टिप्पणी।
दिउँसो भएपछि यी र यस्ता समाचारहरू बहसको रूप लिने च्यानलमा लगभग चलन नै भइसकेको छ। समाचारको बागडोर च्यानलको सबैभन्दा समझदार र अनुभवी वाचिका रोमाना इसार खानको हातमा पुग्यो तर उनले पनि बिहानमा जस्तै त्यो समाचारलाई प्रस्तुत गरिन्। रोमानालाई पनि लागिरहेको थियो कि मनीषालाई भारतलाई सबैथोक दिए पनि अहिले उनी चीनको पक्षमा उभिएकी छन्।
जबकि जेएनयूसँग प्रचण्डको कहिल्यै कुनै साइनो नै भएन। निःसन्देह बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ पीएचडी गरेका हुन्। समाचारवाचिका रोमानालाई यो लागेको हुनुपर्छ कि कार्यक्रमका ती दुई अतिथिलाई धेरैबेर स्क्रीनमा स्थान दिइराख्न उपयुक्त नहुन सक्छ। अतः उनले दुई जनाको आरोपबारे जवाफ दिन विपक्षी दल कांग्रेसका कोही उपस्थित नभएको भन्दै कार्यक्रमको समापन गरिन्।त्यो टेलिभिजन कार्यक्रममा तर्कपूर्ण ढङ्गले यो कुरा हेर्न पाइएन कि कालापानी, लिपुलेक विवाद वस्तुतः के हो र दुई देश कहाँ चुके जसका कारण स्थिति तनावपूर्ण हुन पुग्यो। समय छँदै संवादमार्फत् किन समस्याको समाधान खोजिएन? नेपालका दुई छिमेकी देश छन्- भारत र चीन। के कसैले यो विषयमा चर्चा गरे कि भारतसँग सांस्कृतिक, सामाजिक र भौगोलिक निकटता हुँदाहुँदै नेपाल किन चीनसँग नजिकिँदै गएको भान हुँदैछ? यी कुराहरू नगरेर चीनको इशारामा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्नु समस्याको गहिराइसम्म पुग्नबाट पन्छिनु मात्रै हो।
भाषानुवाद गन्नी अन्सारी
Tags: मनीषा कोइराला